စစ်မှန်တဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာ... - For her Myanmar
ဘဝမှာ အပျော်ဆုံးရွှင်ဆုံးနေ့က ဘယ်နေ့လဲ?
လုပ်လက်စတွေ ခဏရပ်ထားလိုက်ပါ။ ဘဝမှာ အပျော်ရွှင်ဆုံးက ဘယ်နေ့ဖြစ်မလဲ တစ်ချက်ပြန်တွေးကြည့်ပါဦး..
ဆယ်တန်းအောင်တဲ့နေ့လား? ကျမယ်ထင်ထားတဲ့ အင်တာဗျူး အောင်သွားတဲ့နေ့လား? အလုပ်ရသွားတဲ့နေ့လား? ဒါမှမဟုတ် မင်္ဂလာရွှေလက်တွဲခဲ့တဲ့ နေ့လား? ပထမဆုံး ကလေးလေး ဗိုက်ထဲရောက်နေပြီဆိုတာ သိလိုက်ရတဲ့ နေ့လား?
မေးရတာ လွယ်သလောက် ဖြေရခက်တဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုပါပဲ။ ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာ တိုင်းတာဖို့လည်း ခက်ခဲလှပါဘိသနဲ့.. ပြောရမယ်ဆိုရင် အဖြေရှာမရတဲ့ ပုစ္ဆာတွေထဲက တစ်ခုပဲပေါ့.. တစ်ခါတလေ မှန်ကြည့်နေရင်း ကိုယ်ပျော်ရွှင်ခဲ့ဖူးတဲ့ အမှတ်တရတွေက ရုပ်ရှင်ထဲကလို ပေါ်လာတဲ့ အချိန်မျိုးလည်း ရှိသား.. ဒီ တဒင်္ဂပေါင်းများစွာဟာ ဘဝကို အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အချိန်တွေ၊ ဆန္ဒပြည့်သွားခဲ့တဲ့ အချိန်တွေ၊ ကြိုးစားမှုရဲ့ ရလဒ်ကို ခံစားခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေနဲ့ အင်း.. ဘာရယ်လည်း မဟုတ် ပျော်ရွှင်ခဲ့ဖူးတဲ့ အချိန်တွေပေါ့…
Related Article >>> ဘဝကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းပါ
ပျော်ရွှင်ခဲ့ဖူးတဲ့ အခိုက်အတန့်လို့ ဆိုလိုက်ရင် ဘဝမှာ ကြီးကြီးမားမား ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ ဥပမာ ထီပေါက်တာမျိုး၊ အလုပ်မှာ ပရိုမိုးရှင်းရသွားတာမျိုးကို အရင်ဆုံးတွေးမိကြမယ်လို့ ထင်ပါရဲ့နော်.. ဒါပေမဲ့ ဟုတ်ကော ဟုတ်ရဲ့လား? ကျိန်းသေတာ တစ်ခုကတော့ ဘဝကို လည်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်လို့ ကိုယ် ပျော်ရွှင်ခဲ့ဖူးတာတွေကို ပြန်မြင်ယောင်မိတိုင်း ပစ္စုပ္ပန်မှာ အတိတ်တုန်းကလောက် မပျော်နိုင်တော့တာ ပြန်ပြီး သတိထားမိကြတာပါပဲ။
ဒါဖြင့် ပြန်တွေးကြည့်ကြရအောင်.. ဘယ်အချိန်တုန်းက အပျော်ဆုံး ဖြစ်ခဲ့တာလဲ.. အင်း.. စဉ်းစားမရသေးရင် ဘယ်အချိန်က တော်တော်ကြီး ပျော်ခဲ့လဲပဲ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ပါ။ ပြီးတော့ ဘာက ပျော်ရွှင်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တာလဲ… ကိုယ့်ကြိုးစားမှုတွေ အရာထင်ခဲ့တာကြောင့်လား? ဒါမှမဟုတ် အချစ်ကိုများ ရှာတွေ့ခဲ့လို့လား? ဒီအချိန်တွေအတွင်း ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ ထပ်တူ သတိရမိသေးတဲ့ အရာတွေ ရှိသေးရဲ့လား? ဘာတွေများပါလိမ့်?
သေချာတာကတော့ အဲဒီအချိန်တွေမှာ အက်ဒ်မင်တို့တွေဟာ စစ်မှန်တဲ့ အက်ဒ်မင်တို့ ဖြစ်ခဲ့ကြတာပါပဲ။ မျက်နှာဖုံးတွေ လွှင့်ပစ်ခဲ့ကြတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို ကိုယ်လက်ခံခဲ့ကြတယ်။ ဒါပဲပေါ့… ဟန်ဆောင်မှုကင်းတဲ့ အခိုက်အတန့်တွေဟာ ပျော်ရွှင်မှုတွေရဲ့ မြစ်ဖျားခံရာပဲပေါ့..
ဘာက ကိုယ့်အတွက်အရေးကြီးလဲဆိုတာ စဉ်းစားပါ။ တန်ဖိုးထားပါ။
အဖိုးထိုက်တန်တဲ့ အရာမှန်သမျှက လွယ်လွယ်မရသလို စစ်မှန်တဲ့ ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကိုလည်း အလွယ်တကူ ဘယ်ရနိုင်ပါ့မလဲ..
ကိုယ်လုပ်သမျှ အရာအားလုံးကို စေတနာပါပါနဲ့ စိတ်နှစ်ပြီး လုပ်ကြည့်ပါ။
အမုန်းတရားတွေကို ကြေအေးပေးလိုက်ပါ။ ဒီတိုင်း ပြီးပြီးရော လျှော်လိုက်တာ မဟုတ်ဘဲ ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ မေ့ပစ်ပါ။
Related Article >>> ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပျော်အောင်ထားတတ်ဖို့
အောင်မြင်မှုတွေအတွက် မုဒိတာ ပွားပေးနိုင်တဲ့ နှလုံးသား ရှိနေပါစေ။
မဖြစ်လာသေးတဲ့ အရာတွေကို တွေးပြီး စိုးရွံ့မနေပါနဲ့။
မိသားစုနဲ့အတူ၊ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့အတူ အချိန်ကုန်ဆုံးကြည့်ပါ။
ခရီးထွက်ပြီး မိတ်ဆွေသစ်ထဲက မိတ်ဆွေစစ်တွေကို ရှာဖွေပါ။
ဝါသနာပါရာ ၊ စိတ်အားထက်သန်ရာကို ရှာဖွေပါ။
ဒီလိုသာဆို နောင်တတရားကင်းကင်းနဲ့ ဘဝရဲ့ အခိုက်အတန့်အားလုံးဟာ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေ ပြည့်နေလောက်ပြီပေါ့… စစ်မှန်တဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အရှိအတိုင်း လက်ခံလိုက်ခြင်းနဲ့ မာန်မာန၊ ဒေါသတရားတွေ ခဝါချလိုက်ခြင်းက မြစ်ဖျားခံလာတာပါ။
ဘဝမှာ အပြျောဆုံးရှငျဆုံးနကေ့ ဘယျနလေဲ့?
လုပျလကျစတှေ ခဏရပျထားလိုကျပါ။ ဘဝမှာ အပြျောရှငျဆုံးက ဘယျနဖွေ့ဈမလဲ တဈခကျြပွနျတှေးကွညျ့ပါဦး..
ဆယျတနျးအောငျတဲ့နလေ့ား? ကမြယျထငျထားတဲ့ အငျတာဗြူး အောငျသှားတဲ့နလေ့ား? အလုပျရသှားတဲ့နလေ့ား? ဒါမှမဟုတျ မင်ျဂလာရှလေကျတှဲခဲ့တဲ့ နလေ့ား? ပထမဆုံး ကလေးလေး ဗိုကျထဲရောကျနပွေီဆိုတာ သိလိုကျရတဲ့ နလေ့ား?
မေးရတာ လှယျသလောကျ ဖွရေခကျတဲ့ မေးခှနျးတဈခုပါပဲ။ ပြျောရှငျခွငျးဆိုတာ တိုငျးတာဖို့လညျး ခကျခဲလှပါဘိသနဲ့.. ပွောရမယျဆိုရငျ အဖွရှောမရတဲ့ ပုစ်ဆာတှထေဲက တဈခုပဲပေါ့.. တဈခါတလေ မှနျကွညျ့နရေငျး ကိုယျပြျောရှငျခဲ့ဖူးတဲ့ အမှတျတရတှကေ ရုပျရှငျထဲကလို ပျေါလာတဲ့ အခြိနျမြိုးလညျး ရှိသား.. ဒီ တဒင်ျဂပေါငျးမြားစှာဟာ ဘဝကို အဓိပ်ပာယျပွညျ့ပွညျ့ဝဝနဲ့ ဖွတျသနျးခဲ့တဲ့အခြိနျတှေ၊ ဆန်ဒပွညျ့သှားခဲ့တဲ့ အခြိနျတှေ၊ ကွိုးစားမှုရဲ့ ရလဒျကို ခံစားခဲ့ရတဲ့ အခြိနျတှနေဲ့ အငျး.. ဘာရယျလညျး မဟုတျ ပြျောရှငျခဲ့ဖူးတဲ့ အခြိနျတှပေေါ့…
Related Article >>> ဘဝကို ပြျောရှငျစှာ ဖွတျသနျးပါ
ပြျောရှငျခဲ့ဖူးတဲ့ အခိုကျအတနျ့လို့ ဆိုလိုကျရငျ ဘဝမှာ ကွီးကွီးမားမား ဖွဈပကျြခဲ့တဲ့ အဖွဈအပကျြတှေ ဥပမာ ထီပေါကျတာမြိုး၊ အလုပျမှာ ပရိုမိုးရှငျးရသှားတာမြိုးကို အရငျဆုံးတှေးမိကွမယျလို့ ထငျပါရဲ့နျော.. ဒါပမေဲ့ ဟုတျကော ဟုတျရဲ့လား? ကြိနျးသတော တဈခုကတော့ ဘဝကို လညျပွနျလှညျ့ကွညျ့လိုကျလို့ ကိုယျ ပြျောရှငျခဲ့ဖူးတာတှကေို ပွနျမွငျယောငျမိတိုငျး ပစ်စုပ်ပနျမှာ အတိတျတုနျးကလောကျ မပြျောနိုငျတော့တာ ပွနျပွီး သတိထားမိကွတာပါပဲ။
ဒါဖွငျ့ ပွနျတှေးကွညျ့ကွရအောငျ.. ဘယျအခြိနျတုနျးက အပြျောဆုံး ဖွဈခဲ့တာလဲ.. အငျး.. စဉျးစားမရသေးရငျ ဘယျအခြိနျက တျောတျောကွီး ပြျောခဲ့လဲပဲ ပွနျစဉျးစားကွညျ့ရအောငျပါ။ ပွီးတော့ ဘာက ပြျောရှငျအောငျ လုပျပေးနိုငျခဲ့တာလဲ… ကိုယျ့ကွိုးစားမှုတှေ အရာထငျခဲ့တာကွောငျ့လား? ဒါမှမဟုတျ အခဈြကိုမြား ရှာတှခေဲ့လို့လား? ဒီအခြိနျတှအေတှငျး ပြျောရှငျမှုနဲ့ ထပျတူ သတိရမိသေးတဲ့ အရာတှေ ရှိသေးရဲ့လား? ဘာတှမြေားပါလိမျ့?
သခြောတာကတော့ အဲဒီအခြိနျတှမှော အကျဒျမငျတို့တှဟော စဈမှနျတဲ့ အကျဒျမငျတို့ ဖွဈခဲ့ကွတာပါပဲ။ မကျြနှာဖုံးတှေ လှငျ့ပဈခဲ့ကွတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ ဖွဈတညျမှုကို ကိုယျလကျခံခဲ့ကွတယျ။ ဒါပဲပေါ့… ဟနျဆောငျမှုကငျးတဲ့ အခိုကျအတနျ့တှဟော ပြျောရှငျမှုတှရေဲ့ မွဈဖြားခံရာပဲပေါ့..
ဘာက ကိုယျ့အတှကျအရေးကွီးလဲဆိုတာ စဉျးစားပါ။ တနျဖိုးထားပါ။
အဖိုးထိုကျတနျတဲ့ အရာမှနျသမြှက လှယျလှယျမရသလို စဈမှနျတဲ့ ပြျောရှငျမှုဆိုတာကိုလညျး အလှယျတကူ ဘယျရနိုငျပါ့မလဲ..
ကိုယျလုပျသမြှ အရာအားလုံးကို စတေနာပါပါနဲ့ စိတျနှဈပွီး လုပျကွညျ့ပါ။
အမုနျးတရားတှကေို ကွအေေးပေးလိုကျပါ။ ဒီတိုငျး ပွီးပွီးရော လြှျောလိုကျတာ မဟုတျဘဲ ခှငျ့လှတျခွငျးနဲ့ မပေ့ဈပါ။
Related Article >>> ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ပြျောအောငျထားတတျဖို့
အောငျမွငျမှုတှအေတှကျ မုဒိတာ ပှားပေးနိုငျတဲ့ နှလုံးသား ရှိနပေါစေ။
မဖွဈလာသေးတဲ့ အရာတှကေို တှေးပွီး စိုးရှံ့မနပေါနဲ့။
မိသားစုနဲ့အတူ၊ ကိုယျခဈြရတဲ့သူတှနေဲ့အတူ အခြိနျကုနျဆုံးကွညျ့ပါ။
ခရီးထှကျပွီး မိတျဆှသေဈထဲက မိတျဆှစေဈတှကေို ရှာဖှပေါ။
ဝါသနာပါရာ ၊ စိတျအားထကျသနျရာကို ရှာဖှပေါ။
ဒီလိုသာဆို နောငျတတရားကငျးကငျးနဲ့ ဘဝရဲ့ အခိုကျအတနျ့အားလုံးဟာ ငွိမျးခမျြးတဲ့ ပြျောရှငျမှုတှေ ပွညျ့နလေောကျပွီပေါ့… စဈမှနျတဲ့ ပြျောရှငျခွငျးဆိုတာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အရှိအတိုငျး လကျခံလိုကျခွငျးနဲ့ မာနျမာန၊ ဒေါသတရားတှေ ခဝါခလြိုကျခွငျးက မွဈဖြားခံလာတာပါ။
Tags: Happiness, Happy, her club, life, Motivation
နေ့စဉ်သောက်ရမယ့် တားဆေးတွေကို မေ့ပြီးမသောက်မိတဲ့အခါ....
Myat Moe March 27, 2019